Ndepụta SAP ERP Modules na choro na 2018 | Usoro SAP | Ọ BỤ
Kedu ihe bụ SAP Modules? Ndepụta SAP ERP Modules
Nyocha usoro na mmepe mmemme, na oge ọ bụla a maara dị ka SAP enwere ọganihu na ọhụụ SAP ndị a na-emepụta iji jee ozi azụmahịa pụrụ iche na-agba ọsọ site na njikwa ọrụ, ego mmadụ, akwụkwọ ego na ahịa ndị ọzọ karịa ndị ọzọ.
sap eweputara uba uba n'etiti ndị ọkachamara na-arụ ọrụ dị ka SAP akwụkwọ nchịkwa na-ejikwa Atụmatụ Atụmatụ Enterprise, bụ nke dị mkpa maka nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ iji mee ka ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma.
Ihe dịgasị iche iche nke Usoro SAP enwere ike inwe ebe nwere ERP nke na-eme ka otu òtù dị iche iche dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ na-agbakọta n'otu ihe dị mkpa. Tupu oge mbụ, a na-eji ndokwa akụ na ụzụ eme ihe iji mee ihe banyere ngwaahịa. Ka oge na-aga, e kere usoro dịgasị iche iche maka akụkụ dị iche iche nke azụmahịa. Taa, SAP bụ akụkụ dị mkpa nke mpaghara IT na a na-eji ya dịka akụkụ nke ụdị ụdị ọ bụla na-esite na njikwa ozi, akụkọ na-akwadebe na iji na-arụ ọrụ ọrụ.
Site na ịmepụta ikikere SAP na otu n'ime klas ị họọrọ, ọ dị obere na-achọ ka ị nweta ọnọdụ dị ùgwù, bụrụ onye ruru eru iji merie ngwaahịa ahụ ma dọta atụmanya dị mma na ọrụ ndị ị hụrụ n'anya.
Kedu ihe bụ SAP Modules na otu Spo Modules na-arụ ọrụ?
Ndepụta SAP ERP Modules
3. SAP Sales na Nkesa
4. SAP na-achịkwa
5. Ogo Nhazi SAP
7. SAP Nchịkwa Ego Nchịkọta Ego
8. SAP Ihe onwunwe Management
10. SAP Atụmatụ Ego
The Modul ERAP SAP dịpụrụ iche dị iche iche na ntụgharị nke ngwa ngwa dị iche iche. Ha na-anọpụkwa iche maka nnukwu ihe ndị na-eji ha na òtù ndị obere na-enwe ọchịchọ ịmeghachi otu ihe ahụ maka ọrụ nwere nkà.
A na - ekewapụta modulu SAP n'ime Ngwá Ọrụ Ọrụ na Nkà na ụzụ nke n'okpuru ihe niile n'okpuru nkata na - adabere.
Mbadamba modul ndị ọkachamara na-eji,
AP Human Management Management
SAP Sales na Nkesa
Ogo Nhazi SAP
SAP Nchịkwa Ego Nchịkọta Ego
SAP Ihe onwunwe Management
SAP Atụmatụ Ego
SAP Human Capital emere maka nhazi nlekọta ndị ọrụ nchịkwa nke nyere ndị ọkachamara aka iji nyochaa nyocha nke onye nnọchianya, na-akwado nyocha, nyochaa irè ha ma mee ọganihu. Enwekwara ike itinye usoro a iji hazie ego, onye na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri ma mee ka ọhụụ rụọ ọrụ iji mee ka ụdị akwụkwọ dị iche iche dị iche iche n'agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ndị nnọchiteanya ahụ gụnyere ụlọ ọrụ.
Otu ihe dị mkpa n'ime ndepụta, SAP Production Planning enyere onye nlekọta aka ilekọta ọrụ ọ bụla, ịmepụta ahịa, mmemme mgbasa ozi, nlekọta ego, ihe onwunwe na ihe ndị bara uru kwesịrị ịnweta n'ụzọ dị otú ahụ maka ihe kachasị njọ. Usoro nhazi nke nhazi ahụ na-ahazi ma na-elekọta, na-enye echiche nlele nke ịkọwapụta iji mee ma jiri akụ ndị e mepụtara iji mezuo ebumnuche ha.
SAP Sales na Nkesa bụ modul dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla nke na-eme ka ndị ahịa ha kwụ ọtọ. A ga-eji usoro a jụọ iji rịọ maka nkwupụta, mee ka ederede, nkwupụta, gụnyere ma ọ bụ gbanwee mkpesa n'etiti ọtụtụ omume dịgasị iche iche. N'okwu ahụ mgbe onye ọkachamara na-akwado akara SAP na otu n'ime modulu ndị a dị oké egwu, ha nwere ike ịnweta ọrụ na ọfịs ọ bụla. Usoro nhazi ahụ na-agbanyekwa mbupu, njem, ileba anya na ntinye, ego na njikwa ego.
Ebum n'uche maka ụlọ ọrụ na-achọ ihe ndị dị mkpa, SAP na-achịkwa modul na-enye ndị isi ihe ndepụta nke azụmahịa na ọrụ ọ bụla nke ọrụ ya. Ngwakọta ahụ na-eme ka ọ dị mfe ilekọta ụgwọ, ego na egwu. Ịchịkwa na-agagharị dị ka usoro nke etinyere ederede na-enye etiti n'etiti ọnụahịa ihuenyo, uru na arịrịọ ime ụlọ iji dozie na nhọrọ dịka ihe dị mkpa.
A choro inwa onu ogugu iji choro onodu kachasi elu. Na Nhazi nlekọta SAP modul na-enyere ha aka ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mma iji gosipụta mma kachasị mma n'ime ihe ọ bụla ha nwere. Na-agba ọsọ site na okike, ndokwa ma nyochaa ahịa na nlekọta anya, a na-ewepụta ihe niile na interface. Ule nlezianya dị mma bụ ihe dị mma, ọ na-atụle nlezianya nyocha iji kwenye na mma kachasị mma n'agbanyeghị ọkwa nke ihe a na-eziga n'etiti oge.
SAP Project Systems bụ atumatu a kwadoro iji nyere ìgwè ma ọ bụ òtù dum aka ịmepụta otu ọrụ na ụzọ a haziri ahazi. Site n'iji usoro ihe a eme ihe, ndị ọkachamara nwere ike ịmalite ịchọrọ ndokwa, na-esote ma mee ka akụkọ nchịkwa nitty. N'ebe a mgbe a na-ewere usoro a mgbe ọ dị irè, ọ na-enyocha ihe omume oru ngo, ihe ndị gụnyere gụnyere ihe ndị a chọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma.
Mgbanwe ọzọ dị egwu na ndepụta ahụ, SAP ego nhazi usoro chịkwaa njikwa ego na iji mee ihe n'ụzọ dị irè maka mkpa ego nke ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ na-ezu. A na-eji usoro a iji na-ahụ maka ego, ego mmiri, na-echekwa ihe ize ndụ ndị nwere mmekọ. Ọzọkwa, n'ime ndụ ndụ nke ụda ego, ọ pụkwara iji ya na-ahụ maka arụmụka, ihe ụfọdụ na-agagharị dị ka ihe ntinye maka nchịkọta nchịkọta maka ihe ndị e nyere na otu ụbọchị na afọ.
a sap modulu na-achịkwa ihe niile a kọwara nhazi ihe gụnyere inweta ihe ndị dị oké mkpa, ịdebe ihe ndekọ, chọpụta ihe ndekọ ahụ, nyochaa ụdị ahịa nke onye na-azụ ahịa, na-akwụ ha ụgwọ ma kwado nzaghachi nke ahịa ahụ zitere. A pụkwara iji nhazi ahụ mee ihe iji nyochaa ihe ndị dị mkpa.
Maka ụlọ ọrụ ndị na-ezukọta osisi, SAP osisi Mmezi modul na-enyere ha aka ịchịkwa akụkụ dị iche iche nke ịmebe usoro ntọala nke oge a. Nchikota nke mejuputara na-agba ndi okachamara ume imeputa nkwado, mmebi, ihe ngbochi na usoro ihe di iche iche iji kwenye ekwenye.
Ọ bụ ezie na ndị a bụ ezigbo sAP modules na ị kwesịrị ịmara banyere, a SAP asambodo ekewapụrụ na ngwa nke oge a na nhazi ego ka enwere ike inweta ya na nke ọ bụla n'ime teknụzụ nkà na ụzụ ndị dị iche iche nye otu òtù dị iche iche. Usoro kachasị mara amara na-ejikọta Netweaver, ABAP, SAP Basis, BIW, SAP HANA na XI. Site n'ịkwado atụmatụ kachasị mma nke modulu ndị a, otu mkpakọrịta nwere ike ịmekọrịta ihe onwunwe ha n'ụzọ dị irè ma na-aga n'ihu n'ọnọdụ ọnọdụ.
SAP Atụmatụ Ego ezubere iji weputa usoro nke oru ego na iji nweta mmekorita nile bu ndi otu n'ime ha. Ntọala ahụ na-eme ka ọ dị mfe ma na-enyere ego aka ịmepụta ihe iji ghọta àgwà ndị ahụ, belata ọnụahịa mgbe ị ga-echepụta ma dozie na nhọrọ gụrụ akwụkwọ. Ngwurugwu na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe nwere ike iji ndị enyi nke ụdị ọ bụla mee ihe, na-enyere ha aka ijikọta oge ha.
Ntinye abata maka isiokwu SAP Modules List:
ndepụta nhichapụ sappdf
ị maraarụ ọrụ nkà na ụzụmodulu
Ọmụmụ ihe Ọzụzụ kachasị mma gbasara SAP ERP ị ga-anụ